Dawladda Qadar oo diyaarado gurmad sida usoo duulinaysa Muqdisho & DF Somalia oo hakisay. – RadioQandala.com
Dawladda Qadar oo diyaarado gurmad sida usoo duulinaysa Muqdisho & DF Somalia oo hakisay.
Posted on 16 October, 2017 by RadioQandala
Xukuumada Qatar ayaa ku dhawaaqday in ay duulimaadyo caafimaad u duulinayso Soomaaliya subaxnimadii hore ee Axadii lasoo dhaafay, laakiin dawladda Soomaaliya ayaa dib u dhigtay duulimaadkaas maanta oo Isniin ah, waxaana sabab looga dhigay bacdamaa ay Turkigu xili hore soo direen diyaaraddahan.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed (Khader) ayaa sheegay in Dowlada Qatar ay diyaar u tahay inay Muqdisho u soo dirto Diyaarad gurmad ah oo lagu qaado dadka ku dhaawacmay Qaraxii Sabtidii ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in qorshaha uu ahaa in dowlada Qatar ay maanta soo dirto diyaarada Gurmadka ah balse ay iyaga dib u dhigeen maadaama maanta Diyaarad ay soo dirtay Dowlada Turkiga lagu daabulay dhaawacyada ugu daran.
34-ruux oo ka mid ah dadka qaba dhaawacyada ugu daran ayaa maanta loo qaaday dalka Turkiga si halkaasi loogu soo daweeyo, waxaana arintaasi ay qeyb ka tahay dadaalada dowlada Turkiga ay ku garab taagan shacabka Soomaaliyeed, iyadoo Wasiirka Caafimaadka Turkiga uu saaka soo gaaray magaalada Muqdisho, wuxuuna u kuur gali doonaa xaalada dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii ka dhacay Isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho.
« Ra’iisulwasaaraha XFS Kheyre Oo Si Kulul Uga Hadlay Qarixii Muqdisho, Baaqna Deg Deg Ahna U Diray
DAAWO SAWIRRO: Gurmadkii Turkiga oo yimid, Dhaawacyada oo la duubalayo & RW Kheyre oo Kalkaaliye noqday »